Football Khabar » पहिलो लेग हारेपछि एथ्लेटिकोलाई क्लोप र खेलाडीले दिए कडा चेतावनी !
पहिलो लेग हारेपछि एथ्लेटिकोलाई क्लोप र खेलाडीले दिए कडा चेतावनी !
युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा अन्तिम १६ को पहिलो लेगको खेलमा स्पेनिस क्लब एथ्लेटिको मड्रिडले साबिक विजेता लिभरपुललाई गत राति आफ्नो घरमा १–० ले हरायो । प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा एथ्लेटिकोको जितमा साउलले खेलको चौथो मिनेटमै गोल गरेका थिए ।
यो जितसँगै एथ्लेटिकोले लिभरपुललाई हराएर अन्तिम आठमा जाने सम्भावना बढाएको छ । अब लिभरपुलको घरमा हुने दोस्रो लेगमा स्पष्ट हार नभोगे एथ्लेटिको अर्को चरण जानेछ । लिभरपुलका लागि भने एथ्लेटिकोसँगको नतिजा आफ्नो घरमा उल्टाउनुपर्ने दबाब हुनेछ । दोस्रो लेगको खेल अर्को महिना हुनेछ ।
गत राति एथ्लेटिकोको घरमा हारेपछि लिभरपुलका प्रशिक्षक जोर्गेन क्लोप र खेलाडीले एथ्लेटिकोलाई कडा चेतावनी दिएका छन् । खेलपछि मिडियासँग कुरा गर्दै उनीहरूले पहिलो लेग नै अन्तिम खेल नभएको बताउँदै अझै खेलको दोस्रो हाफ (दोस्रो लेग) बाँकी नै रहेको बताए । ‘यो नतिजा हामीले नसोचेको भयो । हामीले खेल जित्नुपर्ने थियो,’ खेलपछि क्लोपले भने, ‘आज हाम्रा खेलाडीले आफ्नो स्तरअनुसार प्रदर्शन गर्न सकेनन् । कहिलेकाहीं यस्तो हुन्छ ।’
क्लोपले अझै आधा खेल बाँकी रहेको बताएर दोस्रो लेगमा एथ्लेटिकोविरुद्ध शानदार कमब्याक हुने चेतावनीमूलक भनाइ राखे । ‘यो नै अन्तिम नतिजा होइन । म उनीहरूलाई एनफिल्डमा स्वागत गर्छु । हामी त्यहाँ कहानी बदल्नेछौं,’ क्लोपले थपे ।
यता, लिभरपुलका खेलाडी आन्डे«य रावर्टसनले भने एथ्लेटिकोका लागि खेलाडीले पहिलो लेग जित्दा खेल नै जितेझैं गरेर व्यवहार देखाएको आक्रोशपूर्ण भनाइ राखे । ‘उनीहरूले यसरी खुसीयाली मनाए, मानौं कि– उनीहरूले हामीलाई अन्तिम १६ बाट आउट गराए,’ रोवर्टसनले खेलपछि भने, ‘हामी आफ्ना कारणले यहाँ हारेका हौं । रिटन लेगमा हामी आफ्नो काम गर्नेछौं, यसमा दुई मत छैन ।’
गत सिजन पनि लिभरपुल सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा स्पेनकै क्लब बार्सिलोनासँग क्याम्प नोउमा ३–० ले हारेको थियो । तर, त्यसपछि आफ्नो घरमा भएको दोस्रो लेगमा उसले त्यही बार्सिलोनामाथि ४–० को नाटकीय जित निकाल्दै फाइनल प्रवेश गरेको थियो । लिभरपुलको सबालमा यसपटक पनि उस्तै कथा दोहोरिएको छ । पहिलो लेगमा ऊ स्पेनिस क्लबसँगै हारेको छ ।
प्रकाशित मिति ७ फाल्गुन २०७६, बुधबार ११:३४